Farsightedness (အနီးမှုန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Farsightedness (အနီးမှုန်)
Farsighted ကို hyperopia လို့ ခေါ်ကြပြီးသူဟာ အဝေးက ပစ္စည်းတွေကို ကွဲပြားစွာ မြင်နိုင်ပေမယ့် အနီးကပစ္စည်းတွေ မမြင်နိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ Farsighted ဟာ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါပြင်းထန်သူတွေမှာ အလွန်ဝေးတဲ့ အနေရာက ပစ္စည်းတွေကိုသာ မြင်ရပါတော့တယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ အသက် အလွန်ငယ်စဉ်မှာအဖြစ်များပြီး မျိုးရိုးလိုက်နိုင်ပါတယ်။
Farsighted ဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဖြစ်များသလဲ။
Farsighted ဟာ အမြင်အာရုံချို့ယွင်းတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အများစုကတော့ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အသက်ကြီးလာခြင်း (သို့) ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Farsighted ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
Farsighted ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
အနီးမှ အရာဝတ္ထုတွေကို ဝါးနေခြင်း
အရာဝတ္ထုတွေကို သေချာမြင်ရအောင် မျက်မှောင်ကျုံ့ခြင်း
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စာဖတ်စဉ် ခေါင်းမူးခြင်း
အချို့ကလေးငယ်တွေမှာ strabismus ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်မှာ အထက်ဖေါ်ပြပါ အချက်အလက်တွေထဲက တစ်ခုခုရှိခဲ့ရင်(သို့) ပုံမှန်အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ ရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။ မကြာခဏ မျက်စိစစ်ဆေးခြင်းကို သင့်မှာ မျက်စိပြဿနာတွေ ရှိနေခဲ့ရင် လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တုံ့ပြန်မှုဟာ မတူညီနိုင်ပါဘူး။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဘာတွေက Farsighted ဖြစ်ပွားစေသလဲ။
Farsighted ဟာ အမြင်အာရုံက ပုံရိပ်တွေမျက်ကြည်လွှာ ပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်ပေါ်ရမယ့်အစား အနောက်ဘက်ကို ပြန်သွားတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အောက်ပါအခြေအနေတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မျက်လုံးတိုလွန်းခြင်း၊ cornea လုံလောက်စွာ မကွေးခြင်း
Lens တွေဟာ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ မျက်လုံးအနောက်ပိုရောက်ခြင်း
ရှားပါးတဲ့အခြေအနေတွေမှာ retinopathy သို့ မျက်လုံးအကျိတ်တွေဟာလည်း Farsighted ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက Farsighted ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
Farsighted ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း – သင့်မိဘတွေမှာ Farsighted ရှိရင်သင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Retinopathy သို့ မျက်လုံးအကျိတ်တွေ ရှိနေရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Farsighted ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
Farsighted ကို မျက်လုံးစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က စစ်ဆေးမှု ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က အမြင်ကို စစ်ဆေးဖို့ lens နဲ့ သူငယ်အိမ်ကို စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Farsighted ကို ဘယ်လိုကုသလဲ။
ကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ Farsighted ဟာ ဒီအချိန်မှာ မျက်လုံးတွေဟာ flexible ဖြစ်ပြီး အသက်ကြီးလာရင် ပြန်ကောင်းလာတတ်တာကြောင့် ကုဖို့ မလိုပါဘူး။
လူကြီးတွေမှာတော့ အကောင်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံးနည်းကတော့ မျက်ကပ်မှန်နဲ့ မျက်မှန်တပ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်ကပ်မှန်၊ မျက်မှန် မတပ်ချင်သူတွေအတွက် ဆရာဝန်က Farsighted ကို ကုသဖို့ ခွဲစိတ်မှုကို ပြုလုပ်ဖို့ အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ လေဆာကုထုံးကို flat cornea နဲ့ retina ပေါ် ပုံရိပ်ထင်ခြင်းကို ထိန်းညှိဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကုသမှုတွေဟာ မျက်မှန်တပ်တာလောက် စိတ်ချရမှုမရှိပဲ အချို့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့် အကောင်းဆုံး ကုသမှုကို ရရှိဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အမြင်အာရုံကို ပြင်ဆင်မှု များခြင်း
အလင်းရောင်ပတ်လည်မှာ အကွင်းတွေ မြင်ရခြင်း
ရှားပါးတဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးအနေနဲ့ အမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးခြင်း
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Farsighted ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Farsighted ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်နာတာရှည် ကျန်းမာရေး အခြေအနေတွေ ဖြစ်တဲ့ ဆီးချို၊ သွေးပေါင်တက်ခြင်းတွေကို ကုသခြင်း
လက္ခဏာတွေကို နားလည်ပြီး တတ်နိုင်သမျှ စောစော ကုသခြင်း
သင့်လျော်တဲ့မျက်မှန်၊ မျက်ကပ်မှန်တွေကို တပ်ခြင်း
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်ရှောင်ကျဉ်ခြင်း၊ အလင်းရောင်ကောင်းတဲ့နေရာမှာ အလုပ်လုပ်ခြင်း
Farsightedness (Hyperopia). http://www.webmd.com/eye-health/tc/farsightedness-hyperopia-topic-overview?page=2. Accessed July 22, 2016.
Farsightedness. https://medlineplus.gov/ency/article/001020.htm. Accessed July 22, 2016.
Farsightedness. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/farsightedness/basics/prevention/con-20027486. Accessed July 22, 2016.
Farsightedness. http://www.healthline.com/health/farsightedness#Treatment5. Accessed July 22, 2016.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတျ 20, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖျောဝါရီ 22, 2018